MR MRT: ထိခြင်း ခိုက်ခြင်း
ဘုရားလောင်း တောမထွက်ခင် သားတော်လေး မွေးဖွားတယ် ကြားရတော့ . . . ဘုရားလောင်းက ရာဟု ဇာတော၊ ဗန္ဓနံ ဇာတံ (ရာဟု ဖြစ်ပေါ်လာပြီ၊ အနှောင်အဖွဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာပြီ။)လို့ ပြောလိုက်မိတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီစကားကြောင့် သားတော်လေးကို ရာဟုလာလို့ နာမည်ပေးလိုက်ကြတာတဲ့။ ရာဟုဆိုတဲ့ အသူရိန် နတ်မင်းက လစန္ဒာကို ဖမ်းချုပ်တယ်လို့ အဲ့ဒီခေတ်က ယုံကြည်ကြတာကိုး။ ဘုရားလောင်းလည်း မင်းသားဘ၀မှာပဲ ရှိသေးတာဆိုတော့ အစဉ်အလာအတိုင်း ယုံကြည်မှာပေါ့။ ဘုရားလောင်းက သူ့သားတော်ကို ရာဟု အသူရိန်လိုပဲ အနှောင်အဖွဲ့ပဲလို့ ရှုမြင်လိုက်တယ် တဲ့။ ဟုတ်တယ်လေ။ သဘောတရားအရ မှန်နေတာပဲ။ တောထွက်ချင်နေတဲ့ ဘုရားလောင်းအတွက် သားတစ်ယောက် မွေးဖွားလာတာက အနှောင်အဖွဲ့ပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ ဒါပေမယ့် သားတော်လေးက ဘုရားလောင်းအတွက် အမှောင် မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားလောင်း မင်းသား အနေနဲ့ . . . အနှောင်အဖွဲ့ကို မြန်မြန် ဖြတ်မှ ဖြစ်မယ်၊ မြန်မြန်တောထွက်မှ ဖြစ်မယ်လို့ . . . ဥာဏ်အလင်းတောင် ရခဲ့သေးတာပဲ . . .။ မမှောင်ပါဘူး။ လင်းတာပါ။ သားတော် ရာဟုလာ မွေးဖွားတဲ့အတွက် မယ်တော်မာယာ နတ်ရွာစံရတာ၊ သားကြောင့် အမေ ထိရတာလို့ ပြောချင်သေးလား။ ပြောချင် ပြောပေါ့။ မတားပါဘူး။
“ဒီကိစ္စတင် မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် . . . မလိုလားအပ်တာ တစ်ခုခု ကြုံရရင် . . . ထိတယ် ခိုက်တယ်လို့ ပြောကြတာကတော့ အသိဥာဏ် မရင့်ကျက် မဖွဲ့ဖြိုးတဲ့အတွက် အကောက်အယူမှားပြီး အယူသီးနေကြတာပါ။ မလိုလားအပ်တာတွေ၊ အဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့ ကြုံကြရတတ်တာကတော့ လောက သဘာဝပါ။ လူမှန်ရင် အို နာ သေ ကြုံကြရမှာပဲ။ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ၊ အခက်အခဲတွေ ရင်ဆိုင်ကြရမှာပဲ။ အကြောင်းနဲ့ အကျိုးကို မှန်မှန်ကန်ကန် မသုံးသပ်နိုင်ဘဲ အလွဲလွဲ အချော်ချော် လက်ညှိုးထိုး စွပ်စွဲမှုတွေနဲ့ အယူသီးနေရင် ဆင်းရဲခြင်းတွေ တိုးပွားဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ အခက်အခဲတွေ ပိုပြီး ခက်ခဲဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပဲ . . . ဒါပဲ။ အတန်းရှိသေးတယ်။ ဒါပဲ . . .။”
Posted by Ashin Acara. at 9:08 PM